Maitiro ekuisa plasmoids pane desktop yedu Plasma | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe akawanda ekuparadzira Gnu / Linux achiuya neCinnamon, Gnome kana MATE sematafura makuru, chokwadi ndechekuti vazhinji uye vazhinji vashandisi vari kuyedza KDE. Iyo inozivikanwa KDE desktop ichiri mupenyu seyakare yapfuura.
Kunyangwe pakutanga pekutarisa isu tisingavone kugona kuzere kweKDE Plasma, tinogona kuigadzirisa kune zvatinoda, tichiwedzera mamwe mapaneru, mawadhi uye mashandiro matsva. Mune ino kesi isu tichaenda kukuudza maitiro ekuisa nyore nyore plasmoids pane yedu KDE desktop.
Plasmoid hachisi chinhu kunze kweiyo widget kana applet iyo yakadzamidzirwa pane desktop. A) Hongu, plasmoid inowedzera mamwe mashandiro, sekukwanisa kuve ne desktop padyo, mimhanzi inodzora kana kungozivisa ziviso. Kune akawanda plasmoid, mamwe ari mune yepamutemo repository asi zvakare tsika plasmoids inogona kuwedzerwa kana kuva wako.
Kuti tigoisa iyo plasmoid nyowani, chekutanga tinofanirwa kubaya-kurudyi pakombuta uye nekuenda kune "Wedzera Widget" kana "Wedzera graphic element" sarudzo. Mushure meizvi, padivi pani ichaonekwa pamwe neese maplasmoid ayo desktop yedu ane nekutadza.
Pazasi isu tichawana bhatani iro rinoshandiswa kuwana mamwe maplasmoid erunyorwa urwu. Kana tikazvimanikidza, sarudzo mbiri dzichaonekwa: "Dhawunirodha mifananidzo mitsva kuPlasma" kana "Isa mifananidzo yemifananidzo kubva kune faira yemuno".
Kana iwe uchida kudhawunirodha plasmoid nyowani, tinya pane "Dhawunirodhi ..." sarudzo uye rondedzero ine iripo plasmoids ichaonekwa. Kuti tiise iyo, isu tinongofanirwa kumaka uye tinya bhatani rekuisa. Zvoga ichawedzerwa kune runyorwa rweplasmoids iri muchikwata chedu uye wobva wawedzera kudesktop nekungodzvanya uye kudhonza.
Kana tichida kuisa plasmoid, isu tinongofanirwa kudzokorora nhanho dzakapfuura, asi sarudza sarudzo "Isa graphic element kubva kune yemuno faira". Screen ichavhura kwatinofanira tsvaga iyo faira neplasmoid, inowanzove ine yekuwedzera ".plasmoid". Kana uchinge wasarudzwa, tinya yakavhurika uye iyo plasmoid ichawedzerwa kune iyo runyorwa rwezvinhu izvo isu tatova nazvo
Iko zvakare kune sarudzo yekuwedzera iyo kuburikidza nemutsetse wekuraira. Kuti tiite izvi tinofanirwa kuvhura terminal patinayo iyo plasmoid faira uye tinyore zvinotevera:
Izvi zvinowedzera iyo widget kune iyo runyorwa rwemajeti ayo edu Plasma ane.
Plasmoid chishandiso chinoshanda uye chinobatsira kwazvo kune mamwe maratidziro asi usashandise zvisirizvo sezvo kuwandisa kwavo kungaita kuti system yedu iende zvishoma kupfuura zvakajairwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Maitiro ekuisa plasmoids pane yedu Plasma desktop
Kuziva sei saizi yezvikumbiro zvatakaisa muGnu / Linux